GV Mpisolovava · Septambra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny GV Mpisolovava tamin'ny Septambra, 2015
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana25 Septambra 2015
Tsy Irery Ireo Bilaogeran'ny Zone9: Mpiserasera Ethiopiana Maro Ihany Koa No Voampanga Amin'ny Fampihorohoroana
Afrika Mainty24 Septambra 2015
Maro be ireo bilaogera Ethiopiana, mpikatroka antserasera sy mpanao politika izay mbola tsy ao anaty sarintany ny anaran'izy ireo. Ankoatra ny raharaha malaza Zone 9 Bloggers, misy ihany koa ireo tanora hafa marobe miatrika fiampangana mitovy amin'izany.
Alemaina24 Septambra 2015
Miharatsy Kokoa Ny Mahazo Ny Vondrona Mpanohana Ny Tanora LGBT Malaza Indrindra Ao Rosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana24 Septambra 2015
Nanome baiko ny Vkontakte - tambajotra sosialy malaza indrindra ao amin'ny firenena mba hanakatona ny kaontin'ny Ankizy-404 ao amin'ny habaka, miaraka amin'ny kaontin'ireo vondrona LGBT efatra hafa ny sampam-panjakana mpanara-maso ny fampitam-baovao ao Rosia, Roskomnadzor .
Azia Atsinanana23 Septambra 2015
"Tsy ho voatazona ny fahalalahana raha tsy vonona ny hiaro azy io isika," hoy i Pravit tamin'ny bitsika nalefany ny andron'ny nitazonana azy.
Nampandoavin'ny fitsarana rosiana noho ny ‘famakiana hafatr'olona manokana’ ao amin'ny Gmail ny Google
Eoropa Afovoany & Atsinanana17 Septambra 2015
Resin'ny mpampianatra akademika iray ao Yekaterinburg lahatra ny fitsaranan'ny tanànan'i Moskoa ny amin'ny ampandoavana onitra 50 000 robla ($765) an'i Google noho ny 'fanitsakitsahana ny mahatsiambaratelo ny taratasy ifandraisan'olona' amin'ny alalan'ny fampiasana doka an'aterineto mahita lasibatra.
Raràn'ny Rosia Ny Fandefasana Ny Lahatsarin'ilay Fehinteny Mirehidrehitra Nataon'ny Lehiben'ny Mpanohitra Tao Amin'ny Efitrano Fitsaràna
Andiana lahatsary maromaro miresaka politika ao amin'ny Yuotube ary manasongadina ny antso ho fikatrohana hanohitra an'i Putin no noraràn'i Rosia tsy ho azo alefa. Indrindra indrindra, noraràn'ny manampahefana ireo lahatsary avy amin'ilay lehiben'ny mpanohitra misy ny fehinteny nanambaràny nandritry ny raharaham-pitsaràna azy